Unokwenza ntoni ukuba intlanzi yakho ijonge phantsi, ungayinceda njani? | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izifo zentlanzi
Ayiloxesha lokuqala ukubona i intlanzi ijonge ezantsi. Hayi, le nto siyithethayo ayisiqhuli kwaphela. Ngaphezulu kwesihlandlo esinye siye kwindawo ethile kwaye sibonile ukuba izilwanyana zasemanzini zazijongeka zimbi kangakanani, zidada (okanye zizama) ngasemva, zijongise phezulu. Ithetha ntoni le nto? Sifanele ukwenza ntoni xa sikule meko? Sinoyika ukuba sineendaba ezimbi kuwe.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi izizathu zokuba kutheni le ntlanzi ijonge phantsi kwaye ujongane njani nayo.
1 Kuthetha ntoni ukubona intlanzi ijonge phantsi?
2 Qubha isifo sesinyi
3 Iziphumo zentlanzi ijonge ezantsi
4 Imisebenzi yothintelo
Kuthetha ntoni ukubona intlanzi ijonge phantsi?
Ngokusisiseko xa intlanzi ijonge phantsi kuthetha ukuba ine kugula, Ngokubanzi inxulumene nokubhukuda isinyi. Oku kuqala, kubi kakhulu. Nangona akufuneki sibeke izandla entloko. Ngokwesiqhelo, ukuba sinesilwanyana ngolu hlobo, kufuneka siyiphathe ngendlela ekhethekileyo, sizama ukuyinyanga ngangokunokwenzeka.
Kukho amatyala aliqela anokuhambelana nale ngxaki, nangona inyani kukuba asizukubeka emngciphekweni iingcebiso zethu. Ukuthathela ingqalelo ukuba izisombululo zinokuba liqela, sicebisa ukuba ubize eyakho wezilwanyana okanye kwingcali enokukunceda. Ngezilungiso nje ezimbalwa unokunceda isilwanyana, nangona kubalulekile ukuba uhambe ngokukhawuleza. Nokuba ujonga nje ngokulula unokukunceda uphathe iintlanzi.
Kuya kufuneka uyazi ukuba iintlanzi zinokuba neengxaki ezininzi impilo, ezinye zazo zinokuba nzulu kakhulu. Ukuba ubona ukuba ubomi babo busemngciphekweni, eyona nto isebenzayo iya kuba kukuqhagamshelana nengcali ngexesha elifutshane.
Xa ubona intlanzi ibhukuda ijonge ezantsi kubonakala ngathi yenza inani elihlekisayo. Nangona kunjalo, kukuba uyagula. Esi sifo sivela kwi-swim bladder kwaye sesinye sezifo eziqhelekileyo ezifumaneka kwiintlanzi. Inokuchongwa ngokulula njenge iintlanzi ezichaphazelekayo sesi sifo ziya kuqala ukudada zibuyele umva. Isisu siya kubekwa phezulu. Isiphumo sokuqubha ngolu hlobo rhoqo kukuba uya kuqhubeka nokubetha yonke into enqumla indlela yakhe kuba engenawo amandla afanayo kuyo nayiphi na into okanye ibhalansi efanayo.
Kwezi meko kufuneka sazi ukuba kungcono ukuya kwingcali ukuze inyange leyo ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, siza kubona imiba ethile yesi sifo ukunceda iintlanzi kangangoko. Kuya kufuneka sazi ukuba Ukuqubha isinyi lilungu lembumba elimile okweqanda eligcwele irhasi. Eli lungu liphethe iintlanzi ezinokulinganisela okuhle kwaye ziyakwazi ukudada emanzini ngaphandle kokufikelela kumphezulu. Ukutshintsha ubunzulu, iintlanzi zigcwalisa okanye zikhuphe isinyi sokuqubha ngeegesi.
Esi sifo siza kuxelwa zezi ntlanzi sivela ikakhulu kukungakhathalelwa okukhulu kweemeko zamanzi e-aquarium. Ukuba asiqhubeki sikhathalela i iimeko zobushushu, ukucoca, pH, inqanaba leoksijininjl. Ivela kwi-aquarium iintlanzi zinokusifumana esi sifo. Ukuya kwinqanaba elincinci, kunokuba ngenxa yeengxaki zokuzalwa. Kwaye kukho ezinye iintlanzi ezinesimo semfuza sokufumana esi sifo kwindawo yokuqubha.
Iziphumo zentlanzi ijonge ezantsi
Esi sifo singena kwintsholongwane ebangela ukudumba kunye nokuqina kwethishu ejikeleze isinyi sokuqubha. Ngenxa yobukho bale ntsholongwane, iintlanzi azikwazi ukwenza ukuba iigesi zingene okanye ziphume ngale ndlela yokuqubha. Ngenxa yoku, ihlala idada ngaphandle kokukwazi ukugcina isikhundla sayo santlandlolo. Inkulu ngakumbi ukudumba kwesinyi, iintlanzi ziya kuzinza kancinci.
Kukho iintlanzi ekuthi ngokwe-morphology yazo zithande ukufunyanwa sesi sifo. Ezo ntlanzi zihlala zinesi sifo zezi zinobhaluni. Ukuba siye safumanisa ukuba iintlanzi zindenze ndadada ubudala besinyi, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuseta i-aquarium eyahlukileyo njengendawo yokuvalela. Kulapha apho kufuneka sibeke ixesha lokugula ukuze lingasuleli abanye.
Nje ukuba siyibeke bucala intlanzi egulayo, kufuneka siye kwivenkile ekhethekileyo siyokuthenga unyango oluthile kuzo zombini i-aquarium ephambili kunye ne-aquarium evalelweyo. Kuya kufuneka silungise ezo zinto zixabisekileyo kwi-aquarium ephambili ebesisizathu sokuthintela isifo. Njengoko besesitshilo ngaphambili, umgangatho wamanzi unokutshintshwa, amanqanaba awo, ubungakanani beoksijini ichithwe, i-pHnjl. La manqanaba kufuneka aqwalaselwe ngokuqhubekekayo kunye nokuhlalutya ukusebenza ngokukuko kwazo zonke izixhobo ze-aquarium ezinje ngamaziko kunye neethemometha.
Xa intlanzi inyangeke ngokupheleleyo siya kuyibuyisela kwi-aquarium ephambili.
Phambi kokunyanga isifo kwaye kufuneka uye kwivenkile ekhethekileyo ukufaka unyango olufanelekileyo, kungcono ukusikhusela. Iintlanzi ngokubanzi azidingi msebenzi okanye ngqwalaselo. Nangona kunjalo, i-aquarium kufuneka siyinyamekele rhoqo. Ukuba sinamanzi alinganayo namanqanaba ahlengahlengisiweyo kunye neqondo lobushushu elifanelekileyo kwiintlobo zeentlanzi esinazo, ngekhe kubekho ngxaki ngazo.
Ngalo lonke ixesha sifaka intlanzi entsha okanye isityalo esitsha, kufuneka siyivale yedwa okwethutyana ngaphambi kokuba siyongeze kwi-aquarium ephambili ukuba sikhe saqubha kwesi sifo ngaphambili. Ixesha lokuvalelwa kufuneka lihlale phakathi kweentsuku ezili-14 ukuya kwezingama-21 de sibone ukuba iintlanzi zichache ngokupheleleyo.
Enye yezindululo eziza kubakho rhoqo kukuthintela ukusikwa kwesi sifo kukunyibilikisa ukutya okomileyo kancinci ngaphambi kokukubeka kwi-aquarium. Kufunyenwe ukuba ukutya okomileyo kubangela ukuba iintlanzi zivale amathumbu kwaye zingabonakala ngathi sesi sifo.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokwenzekayo xa ubona enye indlela ejikelezileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » "Intlanzi yam ijonge phantsi, ndingenza ntoni?"
domenica moya sitsho
molo ndinentlanzi eqhelekileyo neqhelekileyo kodwa uyadada ecaleni and andazi kwenzeka ntoni kuye, ndicela uncede
Phendula kwi-domenica moya
Ndiyathengisa iipeni, ngaba ingcaciso yam ingakunceda? ukuba akunjalo, hamba ngokukhawuleza kunye nomvakalisi olungileyo.
Ngomhla wama-27 kaNovemba ndathenga iintlanzi ezimbini zegolide
Enye, emhlophe neorenji, idada kwicala layo kwaye ide ijike ngokupheleleyo. Inephiko elincinci.
Ndineentsuku ezisi-8 kodwa i-orenji ihlala nje ingashukumi ngamanye amaxesha kodwa akukho nto iqhelekileyo.
Andazi nokuba itanki lam lokuloba ligula kakhulu na okanye sele begula
Umculo uyachaphazela neentlanzi